Ngwa eze na ngwa YUCERA na onye nrụpụta akụrụngwa nwere ndò zirconia ọtụtụ
YUCERA SHT multilayer zirconia ngọngọ nwere nnukwu transluceny, agba ọtụtụ na ike ịgba dị mma. Mkpuchi zirconia multilayer a kacha mma nwekwara diski ziconia multilayer bara uru maka ahịa gị na -eso usoro na adabara maka CAD/CAM na sistemụ ntuziaka niile.
3D Multilayer Monolithic Zirconia Bank Dental Milling Machine na -eji ntụgharị agba agba, ọ dịghị mkpa ịcha.
zirconia blocksare nke nanometer ahụike ọkwa zirconia ntụ ntụ. A na-ebu ụzọ kpoo ntụ ntụ site na ịpịpụta oyi na-atụ ike nke ukwuu wee buru ụzọ mebie ruo ogo ụfọdụ iji nye ezigbo ọrụ.
Enwere ike iji ihe mgbochi 3D Multilayer zirconia mepụta okpueze, àkwà mmiri, inlays na mkpuchi nke ezé ezughị oke nwere ọkwa translucency na agba dị iche iche.